rakibida Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D
rakibida Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D 1 sano 2 bilood ka hor #1414
Codsi caawimaad leh rakibida Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D
Marka hore waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo RIKOOO iyo dhamaan horumariyaasheeda aad iyo aad ugu mahadnaq kuwa badan ee xiisaha leh ee loo yaqaan 'On Ons' diyaaradda duulimaadyada P3Dv4.
Ka dib markii la isticmaalay diyaaradaha qaarkood, waxaan doonayay inaan soo dejiyo sawirka Hawaii Photoreal marxaladdan. Laakiin ma aanan helin rakibidda!
Ka dib markii la soo rogay faylka "Jumbo" iyo saacado badan, waxaan ogaadey in faylka Zip-ka ee 5,77 GB (6.200.281.837 Bytes) aan laga saari karin
"Soo saarista faylka ayaa ku guuldareystay. Diiwaanka ayaa dhaawici kara, lama akhriyi karo, ama qaab aan la jaan qaadi karin".
Waxaan soo noqnoqday soo celinta - isla guulaha isku midka ah!
Ma garanayo waxa aan qalad sameeyay, weydiisana caawimaad iyo raali galin afkayga Ingiriisiga xun!
rakibida Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D 1 1 sano ka hor bisha #1415
Maanta waxaan soo degsaday muuqaalka waxaanan awoodey inaan furo oo aan rakibo dhib la'aan. Waxaan u maleynayaa inaad iskudaydo inaad iskudhacdo galka arkaaga nidaamka unbixiyeyaasha caadiga ah ee Windows ama isku day inaad sameyso dayactir haddii aad isticmaaleyso WinRar ama barnaamij kasta oo kale.
Waad ku mahadsantihiin iyo inaad ku faraxsan tahay
rakibida Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D 1 1 sano ka hor bisha #1416
Waad ku mahadsan tahay wax badan oo ku saabsan caarada wanaagsan! Waxay ahayd qaladkayga; Waxaan adeegsaday barnaamijka qorista (NCH Expresszip) taas oo aan caddayn karayn karin arintan weyn. Iyadoo WinRAR ay ganaaxday.
Sidoo kale rakibida gudaha P3D v4 shaqeeyay - cajiib !!!
Mar labaad mahadsanid iyo guulo badan!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.203